Qorshihii dowlada Sweden ay ku bixinaysay sharciga ku meel gaarka ah oo dib u dhacay | Somaliska
Qorshihii dowlada Sweden ee ahaa in ay dhaqan-galiso bixinta sharciga ku meel gaarka ah kama dambeys bisha May 31-eeda ayaa dib u dhacay ka dib markii ay waqti u waayeen baarlamaanka Sweden ansixinta sharciga cusub. Baarlamaanka ayaa la filayaa in uu dhaqan-galiyo sharcigaas bisha Juun 21-keeda.
Dowlada ayaa sanadkii hore ku dhawaaqday in wixii ka dambeeya bisha May dhamaan qaxootiga wadanka iska dhiiba la siin doono sharci ku meel gaar ah oo keliya. Hadda ayaa inta badan qaxootiga la siiyaa sharci rasmi ah. Sharciga rasmiga ah ayaa wixii ka dambeeya marka sharciga cusub la ansixiyo waxaa la siin doonaa dadka xeryaha qaxootiga laga soo qaado oo keliya.
Dowlada Sweden ayaa aad loogu cambaareeyay sharcigaan cusub oo si weyn wax uga badalaya qaabtii ay Sweden u qaabili jidhay qaxootiga sanadihii la soo dhaafay. Sharcigaan ayaa lagu tilmaamay mid ay dowladu ku doonayso in ay ku cabsi galiso qaxootiga in aysan iska dhiibin Sweden. Taasi ayaa waxaa sii dheer in Dowladu ay xuduudaha ka xirtay dadka qaxootiga ah ee aan aqoonsiga wadan.
Man fahmin inta aad Lee dahay
Waxa LA siin doona dadka xeriyaha qoxoontiga laga soo qado oo Kali ah. Intaas ma waxaad ka wada dadka xeriyaha qoxoontiga dagan oo Kali ah adigoo rali ah intaas cadi u fasil dad badan ayaan fahmi Karin
Dadka sweden iska dhibi doono aya sharci ku meel gaar ah la siin doona bisha Juni sharcigasna wuxu hirgeli doona juni 2 sweden aya sin doonta sharciga joogtada ah ee uppehållstillstånd dadka eey ka so qadato xaryaha qoxotigaa ah. Sasa la yiri walalkis
Website kan wax walba wuu soo qorayaa lakiin ma Sheegayo meesha uu ka soo xigtay.
walalayaal wali ma aragteen qof inte diidma siiyeen loyarka u diren diidmada migration balan u so diren no imaaw goaan laga gara ku shegena dhaheen marke u tagtay naga raali naqo waxba qaldamay anaga dib ku so wacena Allaah og waxeey tahay
Idiris Xasan says:
Sagal isoo qabo warbixin ayaan kala qaadanaynaa 0737803972
Wadankenii allow noohagaaji
March 16, 2016 at 20:50
Asc qof walba wixii ukhayra lee allaha ufududeyo insha allah only
faarax cabdi says:
sharcigaan dadka dhalinyarda ah oo under 18 ma qabanya iiga soo jawaaba fadln asxbta